पढ्न जति सजिलो छ लेख्न त्यति सजिलो छैन । लेख्न सजिलो हुने भएको भए सबै लेखक हुने थिए होला । त्यसैले पाठकको दाँजोमा लेखक थोरै छन् । किनभने आफ्नो अनुभव तथा विचार पोख्ने क्षमता सबैमा हुँदैन । जबकि लेखकको विचार तथा सोचसँग मिल्दो जुल्दो विचार सबैमा हुन्छ । मानिसको सोच या अभिव्यक्ति लिपिबद्ध भएर सार्वजनिक हुनु नै लेख हो भन्न सकिन्छ ।
आफ्ना मनका भावना तथा सोचहरुलाई जबसम्म सार्वजनिक गरिँदैन त्यो भावना जतिसुकै मूल्यवान होस् चाहे जतिसुकै तर्कसिद्ध होस् तपाईको विचार हुँदैन । अर्थात अन्य व्यक्ति चाहे एक होस चाहे हजार होस् आफ्नो विचार या सोचाईलाई अभिव्यक्त नगरिएसम्म त्यसलाई विचार भन्न मिल्दैन सकिँदैन । तर जब त्यहि विचार सार्वजनिक हुन्छ त्यसलाई तपाईको विचार भन्न मिल्छ । त्यसकारण म यस लेखका पाठकहरुलाई के आग्रह गर्छु भने आफुलाई लागेका राम्रा राम्रा विचारहरुलाई सकेसम्म र यथाशिघ्र लिपिबद्ध गर्ने कोशीश गर्नुस् र त्यसलाई बाँड्ने यत्न गर्नुस् ।
'मेरो लेखाई यस्तो छ या नराम्रो छ, कसरी अरुले मन पराउला र ? भन्ने जस्ता हीन भावना मनमा नपाल्नु होस् । मात्र तपाईले सहि मार्गदर्शन दिने सोच राख्न सक्नुपर्छ । त्यो सोच मानवीय हित र उन्नतिकोलागी हुनुपर्छ । सोच व्यक्तिगत हित या वर्ग या समुहको भन्दापनि विशाल हुनुपर्छ । पाठकको समयको सदुपयोग गराउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विश्वप्रसिद्ध लेखकहरु तथा हाम्रै देशका प्रख्यात लेखकहरुले आफ्ना विचारहरु हामी समक्ष नबाँडेको भए तिनिहरु कसरी प्रख्यात हुनेथिए ? तिनिहरुले शाश्वत वाणी बोले, मानवजातीको हक हित र उन्नतिका बारेमा बोले अनि लेखे र त आज विश्वले तिनका नाम आदर र सम्मानपूर्वक लिन्छन् ।
तपाईको विचारले कोहि न कोहिको प्रतिनिधित्व गरिहेको हुन सक्छ । त्यस्तै कसै न कसैसँग तपाईको राय मिलेको पनि हुनसक्छ । तपाईको विचार या लेख त्यस्ता व्यक्ति या समुहले अवश्य मन पराउँछन् र तपाईको 'फ्यान' बनिदिन्छन् । त्यसकारण मनमा लागेको कुराहरुलाई लिपिबद्ध गर्नु तपाईको उत्तरदायित्व हो । कुनैपनि कुराहरु कागजातमा उतार्नु भनेको त्यसलाई स्थायित्व दिनु या प्रमाणीकरण गर्नु हो । आफ्ना मनमा लागेका विचारलाई प्रमाणीकरण गर्नु जस्तो असल के कुरा हुन सक्ला र ?
आफ्ना लेखहरुलाई आवश्यक परे एक पटक फेरि छाँटकाँट या थपघट गर्नुहोस् । एउटै लेख रचना प्रकाशनकोलागी सर्वत्र पठाएर आफ्नो रचनाको अवमूल्यन पनि नगर्नु होस् । कोहि कोहि भन्न सक्छन् म त एकपटक सरर्र लेख्छु कहिल्यै फर्किएर हेर्दिन । यस्तो व्यक्तिसँग तपाई आफुलाई नदाँज्नु होस् । बरु कविशिरोमणी लेखनाथ पौडेल कविता रचना गर्दा शब्द हातमा कौडा खेलाए झै खेलाएर जुन शब्दबाट राम्रो आवाज आउँथ्यो त्यहि शब्दको प्रयोग गर्थे भन्ने भनाईलाई सम्झनु होस् । अर्थात सम्पादन, काँटछाँट तथा थपघट हुनु या गरिनु रचनाको विकास क्रम हो भन्ने कुरालाई मनन गर्नु यथोचित हुन्छ ।
यो लेख पढ्दा पढ्दै तपाईको मनमा केहि नयाँ विचार फुरेन त ? लौ त्यसलाई लिपिबद्ध गरिहाल्नुस त लौ लेखिहाल्नुस् त ।
ho ni malai pani kehi kura lekhau, afno manma bhayeko kura lekhera byakta garau jasto lagchha lekhna suru garyo ani bichaima aayera lekhai nai banda hunchha
kahile kahi feri kunai bisaya ko barema lekhna man lageko hunchha suru nai garna naaaune tesaile kehi pani lekhna sakirahekai chhaina
aaja pani testai lekhna man lageko bhayera khojda khojdai yo tapaiko lekh padhne mauka milyo
dherai dherai dhanyabaad.
suchawonderful memoir .